FIFA Mobile 2017 dị maka iOS na gam akporo ngwaọrụ | Akụkọ akụrụngwa
Otu afọ ọzọ, ma enweelarị ole na ole, FIFA Mobile 2017 dị maka nbudata na iOS na gam akporo ngwaọrụ, site na Storelọ Ahịa na Google Play n'otu n'otu. Tụkwasị na nke a, n'afọ a, ọ pụtawokwa mmalite ya na Windows 10 Mobile ọhụrụ ka onye ọrụ ọ bụla nke na-eji sistemụ mkpanaka ọhụrụ nke Microsoft nwere ike ịme ihe mgbaru ọsọ n'enweghị izu ike.
Otu n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụụ ndị anyị na-ahụ na ụdị a nke ihe egwuregwu bọọlụ ama ama bụ mma amamịghe echiche, mma ndịna na ọhụrụ gameplay. Dị ka a ga - asị na ihe a niile dị gị ntakịrị, ndị egwuregwu nwere mmetụta ugbu a na ihe ga - eme n'oge egwuregwu ahụ ga - emetụta ya.
Dika ihe ohuru di nkpa enwere ike igwu egwu site na onodu egwuregwu ohuru, emere baptism dika agha, nke anyi aghaghi ichoputa ma choputa ihe omimi igwa gi ma uzo ohuru a nke igwu FIFA 17 kwesiri ya ma obu.
N'ụzọ dị mwute, FIFA FIFA a na-esonyere akụkọ ọjọọ na ọ bụ na agbanyeghị na nbudata ahụ bụ n'efu na naanị 17 MB, nke maka egwuregwu abụghị nnukwu oke, anyị ga-ejikọrịrị netwọk nke netwọkụ mgbe niile, nke ga - egbochi anyị igwu egwu mgbe anyị enweghị njikọ connectionntanetị dị.
Lee njikọ iji budata FIFA Mobile 17 maka gam akporo, iOS na Windows 10 Mobile.
FIFA Mobile 17 maka Windows 10 Mobile
Njikere ịmalite ịnụ ụtọ bọọlụ na ekwentị mkpanaaka gị?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » FIFA Mobile 2017 dị maka iOS na gam akporo ngwaọrụ
Kedu ihe ị kwesịrị ime ugbu a ma ọ bụrụ na ịnwere 7 Galaxy Note?